Imveliso emininzi ye-AirPods 3 iqala | Ndisuka mac
Imveliso emininzi ye-AirPods 3 iyaqala
Izolo besilinde into enye "enye into ..." nguTim Cook kunye naye ukuba akhuphe isibini esitsha epokothweni. 3 AirPods. Ewe, sishiywe ngumnqweno. U-Kuo wayelindele ukuba sisebenze ngokungacacanga ukuba oku kuyakuba njalo, kwaye akukho nto kwaphela.
DigiTimes izakupapasha ingxelo ngomso apho ichaza ukuba ngoku ukuveliswa kobunzima besizukulwana sesithathu see-AirPod kuyaqala. Mhlawumbi inkampani khange ifune ukubazisa de ibe inevolthi ethile yeeyunithi ezenziweyo ukuzazisa kwintengiso. Siza kubona.
Amabango e-DigiTimes kumbono wengxelo yakhe ezayo yokuba ukuveliswa kwee-AirPods 3 sele kuqhubeka. Ukupapashwa kwezorhwebo eTaiwan kucacisa ukuba ukuthunyelwa kokuqala kwee-AirPods 3 kuhamba ngesantya esisezantsi. Kule mihla idlulileyo bekukho amarhe okuba ii-AirPods 3 ziya kuziswa kunye nezintsha iPhone 13, I-iPad mini 6 kunye neApple Watch Series 7, kodwa khange kube njalo.
Yonke into ibonakalisile ukuba iApple izakubhengeza ii-AirPods 3 ngexesha lomsitho «Ukusasazwa kweCalifornia«. Ela marhe lavela kumhlalutyi uMing-Chi Kuo, owathi kwinqaku lophando awalithumela kubathengi kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokuba umsitho ubanga ukuba ii-AirPods 3 zaziza kubonakala kumsitho wayizolo.
Ngoku yonke into ibonisa ukuba baya kuziswa kumsitho olandelayo we-Apple oza kubanjwa ngo-Okthobha, ukubonisa entsha these Pro kunye nesoftware entsha yeeMac: iMacOS Monterey.
Enye into enokwenzeka kukuba iApple iphehlelela ii-AirPods 3 ebusuku nangobuqhophololo, ngaphandle kwesaziso okanye intetho. Ayizukuba sisihlandlo sokuqala ukuba sivuke kusasa, sangena kwiwebhusayithi ye-Apple, kwaye safumana isixhobo esitsha, ngaphandle kokubhengezwa okanye ukwaziswa. Ekuphela kwento esiyaziyo kukuba sele beveliswa ngobuninzi, ke baya kuthengiswa kungekudala, kunye okanye ngaphandle kokubonisa kwangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Imveliso emininzi ye-AirPods 3 iyaqala
UNonos ubhengeza i-Beam 2 ngenkxaso yeDolby Atmos, uyilo oluhlaziyiweyo kunye nolunye uphuculo
I-watchOS 8 isungula ngoSeptemba 20